Cuntada Barafaysan ee Ku jirta Weelka Weelka loogu talagalay dahaarka kubbadda qabow ee telfon Warshadda PTFE iyo alaab -qeybiyeyaasha | Xidhmada King
1L/ 1.5L/ 2L/ 3L/ 4L/ 6L/ 12L
10- 40Dou/ Min
Weelka baaquli wuxuu ku jiraa qolof xiran, oo alaab u gudbiya iyada oo loo marayo weel ku xiran silsiladda. Horizontal - vertical - gaadiid isku dhafan oo siman. Waxay noqon kartaa hal dhibic oo wax lagu quudiyo, iyada oo loo marayo aaladda dejinta si loo dhammaystiro dejinta dhibcaha badan. Si buuxda ayaa loo shaabadeeyey, ma daadan. Gaar ahaan in lagu qaado walxaha muuqda. Faa'iidooyinka qalabkani waa qaab dabacsan, heerka jabka jaban ee alaabta, waxayna yareyn kartaa dhacdooyinka alaabada cilladaysan.
1. 304 maaddada birta ka samaysan, oo ka samaysan caag ka samaysan polypropylene (PP).
2. Waxaa lagu dari karaa qalab kale oo taageeraya si loo sameeyo khad wax -soo -saar miisaan iyo otomaatig otomaatig ah oo joogto ah ama goos goos ah si loo xaqiijiyo baakadaha maaddada si otomaatig ah.
3. Waxaa loo habayn karaa iyadoo la raacayo qalabka taageerada macmiilka.
4. Si dhakhso ah ayaa loo kala qaadi karaa, nadiifin habboon.
5. Waxaa lala isticmaali karaa mashiinnada wax lagu duubo ee otomaatiga ah sida mashiinnada baakadaha quudinta ee bacda ama mashiinnada baakadaha toosan.
6. Xataa marka baaquli la foorariyo, waa la ilaalin karaa oo alaabtu ma buuxin doonto.
7. Beddelka beddelka wuxuu ogaan karaa 2 jeer oo quudin ah (wuxuu u baahan yahay in la hagaajiyo waqtiga), iyo xawaaraha gudbinta waxaa lagu hagaajin karaa beddelidda soo noqnoqoshada.
8. Muuqaal qurxoon, oo aan fududayn in la beddelo, iska caabbinta heerkulka sare iyo hooseeya.
9. Xawaaraha waa la hagaajin karaa.
10. Gaadhida baakadaha isku dhafan ee walxaha iyo dareeraha.
1. Alaabta weelka: 304# Bir aan cidhib lahayn / caag ah.
2. Maaddada jirka: 304# birta aan birta lahayn/kaarboon.
3. Macaamiishu waxay u habayn karaan hadba baahidooda.
Hore: 304 Ahama Birta PP/ PVC/ PU ​​badeecada la dhammeeyey Ku dheji Conveyor warshadaha cuntada
Xiga: Shiinaha Factory xawaaraha hagaajin karo ururinta miiska Rotary ururiyay line pakcing
Xamuulka Fayadhowrka, Wiishashka Cuntada, Z wiishka baaldi, Gudbinta Silsiladda, Wareega Suunka Gubashada, Wiishka baaldiga ee rogaya,